Sweet Melody in the Rain: March 2009
အိုဘယ့်မြနန္ဒာ ....
- ပြီးခဲ့တဲ့ စနေက မြနန္ဒာရောက်တယ်။ ဟိုးတုန်းကတော့ မန္တလေးပဲကြော်စားနေကြ။ နောက်ပိုင်း သွားစားတဲ့အချိန်တွေက
မန္တလေးပဲကြော် မရတတ်လို့ကြက်သွန်ကြော်ပဲ စားဖြစ်တယ်။ ကြက်သွန်ကြော်လည်း ကောင်းပါတယ်ပေါ့။
- အဲဒီနေ့ တုန်းက ကလေးရယ်၊ ကျွန်မရယ်၊ အမေရယ် သွားစားကြတယ်။
မန္တလေးပဲကြော်လည်းမရ၊ ကြက်သွန်ကြော်လည်းမရတော့ ဘူးသီးကြော် စားခဲ့ရတယ်။
- ဘူးသီးကြော်ကလည်းအကြီးကြီး။ အချဉ်ရည်ကလည်း ချဉ်စုတ်နေတာပဲ။ စိတ်ကိုလျော့လိုက်ပါတယ်လေ။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ၀ယ်ပြီးမှတော့ စားရတော့တာပေါ့။
- ကလေးပါတော့ နို့ ဘူးလည်းပါတယ်လေ။
- အဲဒီတော့ "အမရေ၊ ရေနွေးလေးများရနိုင်မလား မသိဘူး" ဆိုတော့
- OK. စောင့်လိုက်ပါတယ်လေ။ အဲဒီအမလည်း အားသွားရော။ ကလေးနို့ ဘူးထဲကို ရေနွေးထည့်ပေးတယ်လေ။ (နို့ မှုန့် ကပါပြီးသား) ရေနွေးထည့်လိုက်တာ ကလေး
နို့ ဘူးကမည်းသွားတယ်။ (အဖြူရောင်ဖြစ်ရမှာကို) ။ ဟာ ... သွားပါပြီပေါ့။
- အဲဒါနဲ့"I want HOT WATER" လို့ ပြောပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ HOT WATER ထည့်ပေးတယ်။ လက်စသတ်တော့ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ မှားထည့်တာလေ။
- နို့ မှုန့် ကို ရေနွေးကြမ်းနဲ့ သူ့ ကလေးကို တိုက်တယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ပြောမပြောချင်ဘူး။
- ကလေးကတောင် သူ့ နွားနို့ ကို သူကြည့်ပြီးတော့ ဇဝေဇ၀ါတွေတောင်ဖြစ်ကုန်တယ်။
(မကြီး kom ဆီက ဓါတ်ပုံကို ခွင့်မတောင်းဘဲနဲ့ သုံးထားပါသည်။ စိတ်ဆိုးလည်းဆိုးပဲ :P)
Posted by Melody at 5:17 PM7comments:
- လေရော၊ မိုးရောကြမ်းပြီ ဟေ့ ဆိုလို့ ကတော့ ပျော်စရာကြီးပဲ။ (မိုးရေချိုးချင်လို့ မဟုတ်) ။ ပြတင်းပေါက်တွေ တဂျိမ်းဂျိမ်းနဲ့ ပိတ်တဲ့အသံက အိပ်မောကျနေတဲ့ လူကိုတောင် နှိုးစေနိုင်တယ်။ (ပြတင်းပေါက်တွေ ပိတ်ပြီးတော့လည်း ပြန်အိပ် တာပါပဲ။)
- တခါတလေ စောင်ခြုံပြီး ဒူးကွေး အိပ်တာတောင် ထပ်ကွေးချင်တုန်းပဲ။ အလုပ်သွား
ဖို့ အိပ်ရာက ထရမှာတောင် (တော်တော်ကြီးကို) ပျင်းသွားတယ်။
- ဒါပေမယ့် ...
- သရက်သီးသွားကောက်ဖို့ ကျတော့မပျင်းဘူး။ မိုးလေး တစ်ဖြောက်၊ နှစ်ဖြောက် ရွာပြီ ဆိုတာနဲ့ သရက်သီး သီးရော။ (အချိန်အခါ မဟုတ်လည်းသီးတယ်။) လက်သီးလုံးစာ လောက်ပဲ ရှိတဲ့ သရက်သီးလေးတွေ။ ချိုမှချို။ (သရက်သီးကောက်တာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်
နဲ့ အပြည့်ရဖူးတယ်။ စားလို့ မကုန်ဘူး) ခူးတော့မစားရဲဘူး။ security တွေ့ ရင် fine ပေးရမှာစိုးလို့ ။ :P
- ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ ပျော်တာပေါ့။ ဈေးမှာရောင်းတဲ့ သရက်သီးတွေဆို ၀ယ်မစား ဘူး။ ချိုမှ မချိုတာ။ အိမ်နားက အပင်တွေနဲ့ များတခြားစီ။ သရက်သီးကို ဘယ်လောက် ကြိုက်လဲ ဆိုရင် ထမင်းကို သရက်သီးနဲ့ ပဲစားဆိုရင်တောင် ဖြစ်တယ်။ (အဲ ... အစိမ်းတော့ မစားဘူး) သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် သရက်သီးအစိမ်းကို ငံပြာရည်နဲ့ 
- မိုးတွေ မရွာတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ ခဏပါပဲ။
- စိတ်ဝင်စားစရာ နောက်တစ်ခု ရှိသေးတယ်။ ခရေပင်တွေလေ။ အိမ်နားမှာ တန်းစီပြီးပေါက်နေတာ။ သရက်ပင်တွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဟိုဘက်၊ ဒီဘက်ပေါ့။ ခရေလမ်းလိုမျိုးပဲလေ။ ခရေပန်းတွေ ကောက်ပေရော့ပဲ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကတောင် ပြောသေးတယ်။ တစ်ကုံး S$1 နဲ့ ရောင်းပါလားတဲ့။ :P
Posted by Melody at 2:42 PM5comments:
My Boss's Shop
- keychain လေးကအစ luggage အထိဆိုင်မှာရှိတယ်။ ဘုရား သေးသေးလေး တွေလည်း ရောင်းတယ်။ casino set လည်းရှိတယ်။ နာရီတွေ၊ radio တွေလည်း မျိုးစုံရှိတယ်။ မြင်ဖူးနေကျ မဟုတ်တဲ့ ဒီဇိုင်းအသစ်လေးတွေနဲ့လေ။ Hello Kitty Guitar လည်းရှိတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ အကုန်လုံးပဲ ဈေးကြီးတယ်။
- customer တွေက ပစ္စည်းလေးတွေကို
၀င်ကြည့်တယ်။ မကျေနပ်ရင် (၂)ပတ်၊ (၃)ပတ်ကြည့်တယ်။ ဆိုင်သေးသေးလေးကိုလေ။ တကယ့်ကို ပြတိုက်သေးသေးလေး ကြနေတာပဲ။ အထဲကြည့်ပြီး ပြန်လှည့်သွားကြတာချည်းပဲ။
- ပြီးတော့ ဆိုင်မှာရေးထားသေးတယ်။
“ I break, I cry
You break, You buy “ တဲ့။ ဒီတော့လည်း customer တွေက ပစ္စည်းတွေကို အရမ်းအရမ်း မကိုင်တော့ဘူးပေါ့။ တခါတလေ ဆိုင်ရှင်ကိုတောင် အားနာတယ်။ ဈေးမှ မရောင်းရတာ။ နေ့လည်နေ့ခင်းဆိုရင် (တိတ်တိတ်လေး) ငိုက်လို့ တောင်ရတယ်။ (ဆိုင်မှာကလည်း ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့)
- ဟိုတစ်လောက Laptop ယူလာပြီး game တွေဆော့၊ online တွေတက်လုပ်တော့ Laptop စတဲ့ game ဆော့လို့ ရတာ မှန်သမျှ ယူမလာရ တဲ့။ :P ဒီတော့ စာအုပ်တွေယူလာပြီး ဖတ်နေတော့တာပဲ။ (၀ိနည်းလွတ်တယ်လေ။)
- ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ကိုယ်ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ တော်ပြီပေါ့။ ဆိုင်ခန်းငှားခက တော်တော်ကို ဈေးကြီးတော့ ဆိုင်ရှင်က ဆိုင်ပိတ်တော့မယ်တဲ့။ (အဲဒီလောက်တောင် ရောင်းကောင်းတာ) ကိုယ်သာ ဆိုင်ရှင်ဆိုရင် discount တွေ အများကြီး ချပစ်မှာ။
- ဒါတောင်နော်။ ရှေ့ မှာ pizza ဆိုင်ကြီးရှိနေပေလို့ ။ လူတွေက အဲဒီဆိုင်မှာ စားပြီးပြန်ရင် ကိုယ့်ဆိုင်ကို လှည့်ဝင်တတ်ကြတာမျိုးလေ။ ဒီနေ့ ကတော့ အဆိုးဆုံးပဲ။ S$10 ကျော်ဖိုးပဲ ရောင်းရသေးတယ်။ :(
Posted by Melody at 5:09 PM2comments:
အဘိုး၊ အဘွားအိမ်ရောက်မယ် ... ။
- (အခန့် မသင့်လို့ )
အဖေ့ အငွေ့ အသက်တွေ ရှူရှိုက်ဖို့ 
အဖေ့ အိမ် ပြန်ဝယ်နိုင်အောင်
ခြစ်ခြစ်ခြုတ်ခြုတ် ပိုက်ဆံစုရမယ် ... ။
ဘယ်သူ့ ကိုမှ မနေစေချင်တာလည်း ပါမှာပေါ့။
Posted by Melody at 3:34 PM4comments:
နင့်ကို သိစေချင်လို့ 
လက်ထပ်ယူလို့ မဖြစ်တဲ့ .... မိန်းမတဲ့။
- အမှောင်ထဲမှာပဲ ပျော်တဲ့ ... မိန်းမတဲ့။
အသည်းနင့်အောင် ချစ်တယ်တဲ့ ..... ပြောကြပြန်တယ်။
- ပြီးတော့ ....
သူတို့ က နင့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ပဲ
- ဒုက္ခ၊ သုခတွေကို
နင်နဲ့ မျှဝေ မခံစားပဲ
နင်ဘယ်လို တုန့် ပြန်လေမလဲ ?
- သူတို့ တွေ ကမ္ဘာအနှံ့ သွားပြီး
နင့်ကို ရှာကျွေးဖို့ မှ ဟုတ်ရဲ့ လား ?
(သက်သက်) ဖယ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ
သူတို့ ဆီမှာ ရှိရဲ့ လား ?
- တချို့ ဆိုရင်
အသစ်တွေနဲ့ချစ်သွားကြတာ
နင်သိရဲ့ လား ?
- နင်သိစေဖို့ 
နှလုံးသွေးနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ စာရယ်ပါ။
Posted by Melody at 1:49 PM 1 comment:
ဆံပင် ညှပ်မလို့ စဉ်းစားနေတာ ဘာပုံညှပ်ရမလဲ မသိလို့ .....